Xildhibaanno KGS ka tirsan oo ka digaya in Xukumadda Cusub lagu soo daro Wasiirradii hore – Kalfadhi
Xildhibaan Madkriim Maxamed, oo kamid ah Xildhibaannada Baarlamaanka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan ansixin doonin Golaha Wasiirada ee uu soo dhisayo Madaxweyanaha cusub ee KGS, Cabdicasiis Lafta Gareen, “haddii” buu yiri “uu ku soo daro xubno horay ugu fashilmay howlaha Koofur Galbeed”.
Madaxweyne C/casiis Xassan Lafta Gareen, oo dhawaan lagu doortay magaalada Baydhabo, ayaa ku howlan soo dhisidda Golihiisa Wasiirada, taas oo kamid ah shaqooyinka ugu horreeya ee hor yaala Lafta Gareen, waxaana jira dareen laga muujinayo in xubno horay xilal uga hayey Xukumaddii hore ee KGS uu kusoo daro, taas oo ay Xildhibaannada qaarkood ka digayaan.
“Madaxweynuhu waa in uu soo dhisaa Xukuumad dhameystiran, oo bulshadu ay ku qanacsan tahay, kuwii horena aysan ku jirin” ayuu yiri Xildhibaan Madkariim Iftiin. Waxa uu sheegay inuusan taas uga gol lahayn iney dhamaan Xubnaha Xukumaddii hore wada xumaayeen oo aysan waxba qaban karin, balse haddana ay u baahan yihiin wajiyo cusub oo dadka gelin kara hami cusub, sida uu hadalka u dhigay.
“Dabcan xubnihii hore ma wada xumeyn balse qaar badan, oo aan waxba qaban ayaa ku jiray. Marka, haddii Madaxweynuhu kusoo daro xubnahaas, ma u maleynayo inuu baarlamaanku ansixin doono” ayuu Xildhibaan Madkariim ku yiri Kalfadhi.
Hase ahaatee, Xildhibaan Maxamed Nuur Shiekh ayaa isaguna u sheegay Kalfadhi in aysan jirin wax Heshiis Baarlamaan ah, oo dhigaya ama ka hadlay ansixinta golaha uu soo dhisayo Madaxweynaha, balse ay jirto uun hadal hayn ah in xildhibaannadu aysan ansixin doonin xubno ay ku jiraan Wasiiradii hore. Wuxuuse intaa ku diray in ay wax walba ku xirnaan doonaan sida Wakiillada KGS loogu qanciyo xukumaddii la soo dhiso.
“Hadal hayn uuna jirta, taasina wax weyn ma noqon doonto, maxaayeelay ilaa hadda ma jiro Go’aan Baarlamaan oo lagu yiri shuruuddaas haddii aysan jirin wax xukuumad la ansixinaayo ma jirto. Marka, taasi wax saameyn ah ma yeelan doonto” ayuu Xildhibaan Maxamed Nuur ku yiri Kalfadhi.
Intaanu gelin soo dhisidda xukumaddiisa, waxa uu Madaxweyne Lafta Gareen waday, teer iyo markii la soo doortay kadib, kulamo u badan doonista saamaxaadda wixii ka dhashay doorashada uu ku soo baxay, taas oo uu badideed la yeelanayey Odayaashada Deegaanka, Bulshada Rayidka iyo Xildhibaannada KGS, si uu dowladdiisa ugu abuuro taageero.